Dhalashadii illaa dhimashadii Boqor Xayle Salaase (WQ: Khaalid Mahad Cismaan “Curaagte”) | Dhexnimo Media
Home Maqaalo Dhalashadii illaa dhimashadii Boqor Xayle Salaase (WQ: Khaalid Mahad Cismaan “Curaagte”)
Dhalashadii illaa dhimashadii Boqor Xayle Salaase (WQ: Khaalid Mahad Cismaan “Curaagte”)
Xayle Salaase (Haile Selassie I ) , oo magaciisa dhabta ah lagu magacaabi jirey Tafari Makonnen, wuxuu ku dhashay magaalada Herer , tariikhdu markii ay ahayd 23kii Julaay , 1892 kii .Wuxuu magaalada Addis Ababa ku bakhtiay 27 kii Ogos,1975kii. Odeygan caanka ahaa ayaa soo hoggaamineyay Itoobiya intii u dhaxaysay 1930kii ilaa 1974 kii, wuxuu Itoobiya la tiigsadey xadaarad iyo casriyow qotodheer, isaga oo u sahlay in ay ka qayb qaataan siyaasadda Africa xilliyadii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. Sidoo kale Xayle wuxuu Itoobiya u fududeeyay in ay ka mid noqoto Ururkii Ummadda (Leage of Nation ) iyo Qaramada Midoobeyba , Addis Ababana wuxuu ka dhigay xarunta Midowga Africa (African Union )
Xayle iyo Menilek ll ba , waxaa owowgood la odhan jirey Sahle Selassie (Midna wuxuu u ahaa awow labaad midna wiilkiisa ayaa dhalay ).Sahle ayaa ka tilin jirey boqortooyadii Shewa ee Amxaarada. Xalye Aabihii wuxu la taliye sarre u ahaa Menilek ll , marna badhasaabkii xukumi jirey Gobolka Herer. Xayle , aqoon tiisii horre wuxuu ku qaatay gurri dhexdii , waxaana halkaas wax ku bari jirey wadaadyo mutacalimiin ah.
Mudo ka dib waxa ay boqortooyadii aad ula tacajabtey kartida iyo aqoonta uu leeyahay Xayle waxaana loo dhiibey xilal kala duwan . Ugu horeyn madaxa gobolka Sidaamada , ka dib na badhasaabka Herer, oo uu aabihiina ahaan jirey . Wuxuu isku dayay inuu soo ciyaarsiiyo siyaasaddo cusub oo kor loogu qaadayo sumcadda iyo awooda dawladda kiiyoo billaabay inuu shaqaalaha qaybta uu maamulo u sameeyo mushahaaro. In ta aka dib wuxuu guur saday Wayzaro Menen oo uu Minelik ll awow u yahay sanndku markii uu ahaa 1911 kii.
1928kii wuxuu sahansaday xilka Negus oo ah “ Boqor” , laba sanno ka dib waxaa geeriyootay boqorad Zauditu , waxaana isaga loo caleemo saaray boqor ahaan (2dii Nov, 1930 kii ) waana markii uu la baxay magaca Xayle Salaase (Haile Selassie) . Hal sanno ka dib wuxuu Xayle ikhtiiracy dastuur cusub kaas oo yarayna awooda madaxda kale ee boqortooyada (baarlamaanka) .
Sidoo kale , wuxuu mar labaad xoogga saaray dib u qaabayn lagu saxayo dhaqaalaha, Waxbarashada , iyo Arrimaha bulhsada oo ay ku jireen in uu Jaamacadda Addis Ababab University oo la odhan jirey “Haile Selassie University” ka aas-aasay Kulliyadda Arrimaha Bulshada .
Previous articleXuska Sideeda Maarij iyo Mugdiga ku Duugan (WQ: Cali Cabdi Coomay)
Next articleFaysal Cali Waraabe oo Puntland Weeraray iyo Sababta Keentay